Bagaya ကျောင်း - အမရပူရ | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
← Kyauktawgyi စေတီတော်
အဆိုပါ Bagaya ကျောင်း (သို့မဟုတ် Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း) အမရပူရအတွက်, မန္တလေးတဝိုက်ကဘုရငျဘကြီးတော်ကတည်ဆောက်လျက်ရှိအဖြစ်အစီရင်ခံနေသည် 1834.
ဗမာထဲတွင်ကျောင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းမှဘာသာ. တစ်ခါတစ်ရံဘုန်းကြီးကျောင်းမှား Bagaya ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်, တစ်နည်းနည်းတစ် Ford ကား Mustang Mustang အဖြစ်ကားတစ်စီးဖော်ပြတူသောအရာဖြစ်ပါသည်.
အကြောင်းအရာကိုလည်း Bagaya ကျောင်းဟုခေါ်တွင်သည်အခြားကျောင်းတိုက်ရှိကြောင့်လည်းတချို့လူတွေကိုနည်းနည်းရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ် 10 အင်းထဲမှာနောက်ထပ်တောင်ပိုင်းကီလိုမီတာ. နှစ်ဦးစလုံးမှထွက်စစ်ဆေးနေကောင်းစွာတန်ဖိုးရှိများမှာ.
အမရပူရအတွက် Bagaya ကျောင်းအဟောင်းတော်ဝင်နန်းတော်၏အနောက်ဘက်မြို့ရိုးအလယ်ပိုင်းအချက်နှင့် ပတ်သက်. မန္တလေး-ရွှေဘိုလမ်းမကြီးပိတ်ထားတည်ရှိသည်. အဆိုပါဘုန်းကြီးကျောင်းအသုံးပြုနေဆဲယနေ့. ဘုန်းကြီးကျောင်း၏နောက်ကျောကိုထုတ်သငျသညျမူလတော်ဝင်နန်းတော်၏အနောက်ဘက်အခြမ်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သောကျုံး၏အကြွင်းအကျန်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါဖန်စီကျွန်းသစ်အကယ်စင်စစ်ထွင်းထုများနှင့်အဆောက်အဦး၏အပြင်ဘက်တွင်အပေါ်အလှဆင်လှလှပပပြု. ခေါင်မိုးစတိုင်အဟောင်းစတိုင်ငါး tier flyaway အနီရောင်ခေါင်မိုးဖြစ်ပါသည်. မြေတပြင်လုံးမိုးမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအစွန်းဖြည့်စွက်ဖို့လက်သမားအချိန်ကြာမြင့်စွာယူကြပြီရမည်ဟု exquisitey ထွင်းပြားနှင့်အတူတန်ဆာဆင်နေသည်, အချို့သောအံ့သြဖွယ်အသေးစိတျ. မြေတပြင်လုံးဘုန်းကြီးကျောင်းအနီရောင်အဖြူနှင့်ရွှေရောင်စုံနေသည်.
သငျသညျရှေးပါဠိ script များတစ်ဦးစာကြည့်တိုက်နှင့်အတူတစ်ဦးပြတိုက်အဖြစ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်၏အကောင်းတစ်ဦးစုဆောင်းမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်အတွင်းပိုင်း.
သင်ကူညီရှာဖွေရန် Google Maps တည်နေရာ Bagaya ကျောင်း အမရပူရအတွက် – Google Maps ကို
Bagaya ကျောင်း (Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း) ခရီးစဉ်အော်ပရေတာပုံမှန်အားသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားယူမယ်လို့အဓိကဆိုဒ်များ၏တဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူး, သင်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်သင်အများကြီး quiter တခြားသူတွေထက်ရှာဖွေသင့်တယ်. တစ်ဦးအလည်အပတ်တန်ဖိုးရှိ, အလွန် Photogenic.